Global Voices teny Malagasy » ‘Vehivavy Mavo Volo Silantsilana’ Toy ny Ahoana No Mety Mitovy Amin’i Dalai Lama · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jona 2015 3:15 GMT 1	 · Mpanoratra I-fan Lin Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Taiwan (ROC), Fivavahana, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Ambany fahazoan-dàlana CC BY-NC ito asan'i Dollydraw ‘Tibet Afaka’ ito.
Nahatonga aingam-panahy ho an'ireo mpamorona sary miaina any Taiwan sy Hong Kong ny Dalai Lama, tamin'ilay fanehoankeviny vao haingana  milaza fa mety ho toy ny “vehivavy mavo volo silantsilana” miaraka amin'ny tarehy tsara tokoa izy raha tafatsangana amin'ny maty, raha tsy izany “tsy misy olona miraharaha azy”.
Tamim-pahamatorana kokoa kosa, namerina nanamafy ny heviny ny taona 2004  ilay Bodista malaza, tamin'ilay gazety an-tsoratra Britanika The Sunday Times hoe, mety tsy hiverina hiaina  mihitsy aza izy raha jerena ny tetikasan'ny governemantan'i Beijing, miditriditra amin'ny fananganana indray ny Dalai Lama faha-15. 
Inoan'ny Bodista Tibetana fa afaka manomboka fiainana vaovao ao aminà vatana iray vaovao ny fanahy, aorian'ny fahafatesana ara-batana. Atao ho toy ny filohan'i Tibet ara-politika sy ara-panahy ny Dalai Lama ankehitriny, izay efa ho feno 80 taona, sahala amin'ireo Dalai Lamas rehetra nisesy teo aloha, 369 taona izay hatramin'ny taona 1642; izy izay feno 80 taona amin'ity taona ity. Dingana sarotsarotra ny fiverenan'ireo mpitondra fivavahana amin'ny aina indray any Tibet izay teo ambanin'ny fitondràna feno famoretan'i Shina nandritra ny 60 taona, iray izay nolalaovin'i Beijing mba hahafahany manao izay tiany atao amin'ireo Tibetana.
Mba hiatrehan'izy ireo ilay resabe, ary hanehoan'izy ireo ny fanohanana azy, nanomboka nanokatra pejy Facebook ireo mpamorona sarimiaina any Taiwan sy Hong Kong, ilay Dalai Lama Mavo Volo . Nanao sary maro izy ireo ary nanoratra ny tantaran'ny hoavin'ilay Dalai Lama faha-15 toy ny vehivavy mavo volo. Toy izao matetika ny fipetraky ny tantaran'izy ireo, ‘indray andro, nolazainy ahy fa Dalai Lama faha-15 ny anabaviko/ny mpiray vodirindrina amiko/ilay mpianatra vaovao.’
Ito asan'i Usagihime ‘Lama ny mpifanolo vodirindrina amiko’ dia nampiasàna ny fahazoan-dàlana CC BY-NC.
Nampiasàna ny fahazoan-dàlana CC BY-NC ito asan'i Dollydraw ito : ‘ Lama ny zandriko vavikely’.
Nampiasàna ny fahazoan-dàlana CC BY-NC ito asa ‘ Nidona tamin'ny rindrina teny am-pandehanana’ ito.
Ito asan'i LISianthus ‘Lama aho… misy mahagaga ?’ ito dia nampiasàna ny fahazoan-dàlana CC BY-NC.
Ito asan'i Nana (koadenium) ‘ Dalai Lama ilay mpianatra vaovao !’ ito dia nampiasàna ny fahazoan-dàlana CC BY-NC.
Ito asan'i bigGoldfishbowl ‘Ahoana moa no maha-Lama ny rahavaviko ! ‘ito dia nampiasàna ny fahazoan-dàlana CC BY-NC.
Nampiasàna ny fahazoan-dàlana CC BY-NC ito asan'i Mincelot ito.
Namerimberina imbetsaka ilay Dalai Lama ankehitriny, Tenzin Gyatso, izay niaina an-tsesitany tany India hatramin'ny taona 1959, fa mety tsy hiverina hiaina  ety intsony izy. Milaza i Beijing fa “ny Dalai Lama dia tsy manan-kambara amin'ny hoe hiverina hiaina na tsia” ary miankina amin'ny governemanta Shinoa ny fanapahankevitra farany; raha toa ka niteny  hoe “miankina amin'ny Dalai Lama ny fanapahan-kevitra hoe hateraka indray izy na tsia” ny Karmapa Lama, ilay mpitondra ambony indrindra fahatelo amin'ny fivavahana Bodisma Tibetana, ary any an-tsesitany ihany koa.
Tsy mpino i Shina raha amin'ny filazàna ofisialy, fa tsy nanakana an'i Beinjing tsy hiditra amin'ny olanan'ny fivavahana tao Tibet anefa izany teo aloha. Ohatra iray amin'izany ny fananganana indray ny Panchen Lama faha-11 , ny mpitondra lehibe indrindra faharoa amin'ny Bodisma Tibetana. Ny taona 1995, nanaiky ny fitsanganana indray an'i Panchen Lama ny Dalai Lama, ary avy eo notazonin'i Beijing izy ary nosoloiny zazalahy iray nosafidiany.
Raha jerena ny tondrozotran'ny governemantan'i Beijing amin'ny fanodinkodinany ny dingan'ny fitsanganana indray, mba afaka misafidy ilay “vehivavy mavo volo silantsilana”, miohatra noho ireo kandidà hafa, farafaharatsiny ireo mpakafy sarimiaina.
Lahatsoratra an'ny GV mifanaraka amin'io:
Mpihira Hafa Ao Shina Nosamborina Noho Ny Fanandratany Ny Mari-panondroana Sy Ny Kolontsaina Tibetana 
Shina: Faratenin'ireo Tibetana miisa 19 Nandoro Ny Tenany 
Shina: May ny Tibet, fa aiza ireo manam-pahaizan'ny fanjakana Shinoa?  (Amin'ny teny Anglisy)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/06/02/70652/
 fanehoankeviny vao haingana: http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Asia/article1557049.ece
 ny heviny ny taona 2004: http://en.wikipedia.org/wiki/15th_Dalai_Lama
 mety tsy hiverina hiaina: http://www.nydailynews.com/news/world/dalai-lama-mulls-reincarnation-blonde-article-1.2225449
 tetikasan'ny governemantan'i Beijing, miditriditra amin'ny fananganana indray ny Dalai Lama faha-15.: http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2015/03/12/china_and_dalai_lama_spar_over_reincarnation.html
 ilay Dalai Lama Mavo Volo: https://www.facebook.com/pages/%E6%88%91%E8%A6%81%E6%98%AF%E8%BD%89%E4%B8%96%E5%BF%85%E5%AE%9A%E6%98%AF%E5%80%8B%E6%B7%98%E6%B0%A3%E6%BC%82%E4%BA%AE%E7%9A%84%E9%87%91%E9%AB%AE%E5%A5%B3%E5%AD%A9/411790005692138?hc_location=ufi
 mety tsy hiverina hiaina: http://www.nytimes.com/2015/03/12/world/asia/chinas-tensions-with-dalai-lama-spill-into-the-afterlife.html?ref=world&_r=0
 Panchen Lama faha-11: http://en.wikipedia.org/wiki/11th_Panchen_Lama_controversy
 Mpihira Hafa Ao Shina Nosamborina Noho Ny Fanandratany Ny Mari-panondroana Sy Ny Kolontsaina Tibetana: https://mg.globalvoicesonline.org/2014/05/29/60162/
 Shina: Faratenin'ireo Tibetana miisa 19 Nandoro Ny Tenany: https://mg.globalvoicesonline.org/2012/11/30/41610/
 Shina: May ny Tibet, fa aiza ireo manam-pahaizan'ny fanjakana Shinoa?: https://globalvoicesonline.org/2012/01/24/china-tibet-burns-but-where-are-the-chinese-public-intellectuals/